के तपाईं बेनडा्रिललाई क्लेरटिनसँग लिन सक्नुहुन्छ? एलर्जी मेड्स मिश्रण गर्ने बारेमा प्रश्नहरू - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय समुदाय, कम्पनी कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस खेलहरु भारी खेल समुदाय, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> एक स्निज-मुक्त मौसमको लागि एलर्जी औषधि कसरी जोड्ने सिक्नुहोस्
खुजली, पानी आँखा। घाँटी घाँटी लगातार खोकी र छींक लाग्ने। परिचित ध्वनि? धेरै Million करोड अमेरिकीहरू एलर्जीबाट ग्रस्त छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने, एलर्जी संयुक्त राज्यमा दीर्घकालीन रोगको छैठौं प्रमुख कारण हो। यस देशले हेरचाह र उपचारमा प्रत्येक वर्ष १$ अरब भन्दा बढी खर्च गर्दछ। Gesundheit।
अमेरिकीहरूसँग उनीहरूको एलर्जी लक्षणहरूको उपचारको लागि ओभर-द-काउन्टर विकल्पहरू छन्, मौखिक एन्टीहिस्टामाइन्स, नाकको स्प्रे र आँखा ड्रप सहित। कहिलेकाँही डाक्टरहरूले पनि डिकन्जेन्टेन्ट सिफारिस गर्न सक्छन्। तर धेरै एलर्जी पीडितहरूले तपाईंलाई भन्नेछन्, त्यहाँ प्रायः कुनै पनि पूर्ण औषधी हुँदैन जुन उनीहरूका सबै लक्षणहरूलाई कम गर्दछ।
यसैले यति धेरै व्यक्तिहरू एलर्जी मेडहरूमा डबल गर्ने विचार गर्दछन्। स्वास्थ्य-सचेत अमेरिकीहरू अक्सर सजग हुन्छन् कि उनीहरूले कुनै पनि औषधिको सिफारिश गरिएको खुराक भन्दा बढी लिनुहुँदैन। तर के यो दुई अलग औषधिहरू सँगै राख्न सुरक्षित छ? Allegra र Claritin ठीक संयोजन गर्दै छ ? के तपाईं बेनडा्रिललाई क्लेरटिनसँग लिन सक्नुहुन्छ? हामीले पत्ता लगाउन केहि चिकित्सा विशेषज्ञहरूसँग जाँच इन गर्यौं।
सम्बन्धित : के यो रक्सी र एलर्जीको औषधि मिश्रण गर्न सुरक्षित छ?
के मिश्रणको एलर्जी मेड सुरक्षित छ? के तपाईं बेनडा्रिललाई क्लेरटिनसँग लिन सक्नुहुन्छ?
अधिकांश एलर्जी औषधिहरू एक अर्कासँग जोड्नु हुँदैन, प्राथमिक चिकित्सक सुसन बेसेरका अनुसार दया चिकित्सा केन्द्र बाल्टीमोर, मेरील्याण्डमा। तपाईले बहु मौखिक एन्टिहिस्टामाइन्स एकसाथ लिनु हुँदैन, जस्तै बेनाड्रिल, क्लेरटिन, जाइरटेक, एलेग्रा वा जाइजल। एउटा रोज्नुहोस् र यसलाई दैनिक लिनुहोस्। ती औषधीहरूले लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न राम्रोसँग काम गर्दछन् यदि तपाईं तिनीहरूलाई दैनिक लिनुहुन्छ, उनी बताउँछिन्।
डा। डुएएन गेल्स, एक एलर्जी विशेषज्ञ अन्नापोलिस एलर्जी र दम अन्नापोलिसमा, मेरील्याण्ड सहमत छ कि एक भन्दा बढी मौखिक एन्टीहिस्टामाइन संयोजन गर्नु मूर्खता हो। यहाँ डबलिंगको साथ समस्या छ, डा। जील्स भन्छन्। एफडीएलाई यी औषधिहरूको परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ उनीहरूको सुरक्षा निर्धारित गर्न, र परीक्षण पैसा खर्च गर्दछ। क्लेरिटिन व्यक्तिहरूले उनीहरूको औषधि स्वीकृत हुनको लागि सुरक्षा अध्ययनको लागि भुक्तान गर्नेछन्, र एलेग्राले पनि। तर क्लेरिटिनले अध्ययनको लागि भुक्तान गर्दैन यसले एलेग्राको साथ लिनको लागि सुरक्षित छ भनेर देखाउँदछ। र एलेग्राले क्लेरटिनसँगै राख्न सुरक्षित छ भन्दै अध्ययनको लागि पैसा तिर्ने छैन।
तर के हुन्छ यदि बिरामीले एउटा मौखिक एन्टीहिस्टामाइनले छींक गर्न रोक्न सक्दैन?
सम्बन्धित: बेनाड्रिल विवरणहरू Claritin विवरण | Zyrtec विवरणहरू Allegra विवरणहरू जाइजल विवरण
सामान्य रक्त शर्करा को लागी संख्या के हो?
तपाईं एलर्जी नाक स्प्रे संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ?
डा। जेल भन्छन्, म सामयिक नाक स्टेरोइडहरू सुझाव दिन्छु, यदि उनीहरूलाई contraindication छैन भने। ती नाक स्प्रे हुन्। फ्लोनाज, नासाकार्ट र राइनकोर्ट काउन्टरमा उपलब्ध छन्।
उहाँ जारी राख्नुहुन्छ, यद्यपि, यदि it خارदा आँखाहरू बिरामीको मुख्य मुद्दा हुन् भने, सामयिक एन्टीहिस्टामाइन (आँखा ड्रप) राम्रो हुन्छ। केहि छनौटहरूमा काउन्टीफेन (Zaditor) काउन्टर माथि, वा ओलोपाटाडाइन जस्तो प्रिस्क्रिप्सन [पाटाडे, पाजेयो, वा पाटानोल]।
अक्सिमेटाजोलिन (अफ्रिन) को रूपमा तपाईले अनुनासिक डिकोजेन्टेन्ट स्प्रेबाट जोगिनु पर्छ जबसम्म पूर्ण रूपमा आवश्यक पर्दैन। त्यसो भए पनि, अफ्रिनलाई तीनदेखि पाँच दिनसम्म प्रयोग नगर्नुहोस्। यी औषधीहरूले पल्टाउने भीडलाई निम्त्याउँछ र लत हुन्।
सम्बन्धित : के तपाई अफ्रिनको लतबाट ग्रसित हुनुहुन्छ? | Zaditor विवरण ओलोपाटाडाइन विवरणहरू पाटाडे विवरण
Sudafed जस्तै मौखिक decongestants के बारे मा के?
Sudafed (मौखिक रूपमा लिइएको) स्यूडोफेड्रिन वा फिनाइलफ्रिन हुन सक्छ, डा। Gels भन्छन्। पूर्वले अब एक आईडी देखाउन आवश्यक छ र काउन्टर पछाडि छ, यद्यपि यो पर्ची आवश्यक छैन। यो पछिल्लो भन्दा अलि राम्रो काम गर्दछ, जुन तखानहरूमा छ। दुबैले अनिद्रा वा छिटो मुटुको दरलाई ट्रिगर गर्न सक्दछ विशेष गरी जब क्याफिनसँग मिल्दछ, त्यसैले यो मार्गमा जानु भन्दा पहिले आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
40 भन्दा बढी को लागी सबै भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण गोली
जे होस्, सुदाफेडलाई than बर्ष भन्दा कमका बिरामीहरूलाई टाढा राख्नुपर्दछ किनकि विषाक्तताको बढि जोखिम हो जुन घातक हुन सक्छ। साथै, यदि तपाइँ हालसालमा मोनोमाइन अक्सिडेज इनहिबिटरहरू एन्टिडिप्रेस्रेस (एमओओआई) मा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्थ्यो भने, यसलाई पनि वेवास्ता गर्नुपर्छ।
र याद गर्नुहोस्, तपाईंले गर्नु पर्छ सँधै खुराक सिफारिसहरू पालना गर्नुहोस् ड्रग लेबलमा, कुनै पनि औषधीको ओभरड्स गर्दा साइड इफेक्ट हुन सक्छ। (र always बर्ष भन्दा कान्छो बच्चालाई कुनै औषधी दिनु अघि औषधीको लेबललाई सँधै सन्दर्भ गर्नुहोस्।) एन्टीहिस्टामाइन्सको उच्च खुराकले निन्द्रा र चाँडो मुटुको दर बढ्न सक्छ, नॉन-सेडेटिंग प्रकारको पनि। Zyrtec र Claritin जस्ता औषधिहरू मात्र एफडीए-अनुमोदित खुराकमा गैर-सुस्त छन्। यसका अतिरिक्त, सेडेटिंग एन्टिहिस्टामाइन्सको अधिक मात्रा (सोच्नुहोस् बेनाड्रिल) ले दौड र भ्रम पैदा गर्न सक्छ।
यसबाहेक, केहि एन्टीहिस्टामाइन्स दुखाई औषधि वा डिकन्जेन्ट्ससँग मिल्दछन्। यदि तपाइँ एकै समयमा अर्को पेन किलर वा डिकन्जेस्टन्ट लिनुभयो भने, यसले ओभरडोज पनि निम्त्याउन सक्छ।
त्यसैले ध्यानपूर्वक लेबल पढ्नुहोस्। यदि तपाईं अरू कुनै औषधि लिईरहनु भएको छ भने, यो प्रिस्क्रिप्सन वा काउन्टर भन्दा बाहिरको हो भने, कृपया तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टलाई सोध्नुहोस् यदि तपाईंको एलर्जी औषधि लिन सुरक्षित छ भने। तपाईले विष नियन्त्रणलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले सोच्नुभयो कि तपाईले धेरै लिनुभयो वा धेरै धेरै तपाईको बच्चालाई दिनुभयो। फोन नम्बर १-8००-२२१-१२२ हो, वा प्रयोग गर्नुहोस् अनलाइन उपकरण । जब श in्का लाग्छ, एक पेशेवर सोध्नुहोस्।
यहाँ एक स्वस्थ (र छोटो) एलर्जी मौसम हो!
8 सर्वश्रेष्ठ आकस्मिक ब्याकप्याक किट हडप र जानुहोस्
रगत परीक्षण मा hct के कम छ
viibryd लाई काम गर्न कती समय लाग्छ?
तपाईं strep घाँटी को लागी keflex लिन सक्नुहुन्छ
दुखाइ को औषधि तपाइँ गर्भावस्था मा लिन सक्नुहुन्छ